Wasiirka Arimaha Dibada ee Dalka Itoobiya ayaa Gaadhay Magaalada Baydhabo ee Xarunta G/ Bay | maakhir.com
Wasiirka Arimaha Dibada ee Dalka Itoobiya ayaa Gaadhay Magaalada Baydhabo ee Xarunta G/ Bay
Baydhabo:- Wasiirka arimaha dibada ee Dalka Itoobiya Siyuum Musvin ayaa ka Degay maanta Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay, Masuulkaasi ka socda Dalka Itoobiya ayaa waxa la sheegay in markiiba loo Gal biyay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Baydhabo isaga oo markiiba Kulan Xasaasi ah la qaaday Masuuliyinya DFS.
Safarka Siyuum Musvin ayaa ahaa mid aan Horay loo shaacin isaga oo la sheegay inuu ahaa mid Kadis ah oo uu ku Tegay Magaalada Baydhabo, ujeedkiisa Masuulkaasi ayaa la qeexay inuu ahaa bala inuu wada hadal la yeesho Masuuliyiinta ugu saraysa Dawlada Somaliya oo uu hogaaminayo Madaxwayne Yuusuf.
Mr Musvin ayaa waxa aad loogu rajo wayn yahay inuu C/laahi Yuusuf kala hadlo Xaalada Dalka Somaliya ee ay Dagaaladu ka Hulcayaan iyaga oo Diirada si toosa u saaridoona Xaalada Cakiran ee magaalada Caasimaha ee Muqdisho.
Wararka ayaa sheegay inay Siyuum Musvin iyo Masuuliyiinta Dawlada Somaliya ay maanta aad uga wada haleen sida ugu fudud ee Dalka Somaliya looga dhalin karo Xal waara oo mid Nabad ku salaynsan.
Lama sheegin cida Siyuum Musvin ku wahelsa Safarkiisa uu kaga soo Boqoolay Magaalada Caasimaha ah ee Adis-Ababa, Balse waxa la cadeeyay inuu la socday Diyaarada u gaar ah oo ka soo qaaday Garoonka Magaalada Adis-Ababa
Waxa jira inay magaalada Baydhabo ay maanta Galinkii hore iyo kii danbeba ay ka socdeen Kulamo Gaar Gaar ah ay leeyihiin masuuliyiinta Dawlada ugu saraysa iyo Xildhibaanada Baarlamaanka.
« Dawlada Kenya ayaa ka Rartay Ciidamadeeda Xuduuda Dalka Somaliya ay la wadaagto
Puntland oo ka hashay Kooxo Budhcad ah oo Jidgooyooyin ah »